कांग्रेसको गोजीमा सत्ताको साँचो ! « Mechipost.com
कांग्रेसको गोजीमा सत्ताको साँचो !
प्रकाशित मिति: १२ फाल्गुन २०७७, बुधबार २१:४२
फिदिम । संसदीय राजनीतिको पुरानो खेलाडी कांग्रेस । कांग्रेसभित्रका पनि लिजेन्ड खेलाडी शेरबहादुर देउवा । सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै धेरैले अब सत्ता समीकरणको साँचो कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको हातमा पुगेको ठानेका छन् ।
मंगलबार चितवनबाट फर्केलगत्तै नेकपाका पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकहाँ पुगिसकेका छन् । नेतात्रयको संक्षिप्त भेटवार्ता सत्ता साझेदारीमै केन्द्रित थियो । नेकपाका दुवै नेताले संसद पुनःस्थापनाले संविधान जोगिएको भन्दै संसदमा सहकार्यको प्रस्ताव गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिए अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्ने विषयमा प्रचण्ड–माधवले सहयोग मागे पनि देउवाले कुनै वचन दिएनन् ।
“भोलि पार्टीका पदाधिकारहरुसँग छलफल गर्छु अनि खबर गरौंला”, देउवाले दुवै नेतालाई भने । यसअघि गत पुस २९ गते संयुक्त आन्दोलनको प्रस्ताव लिएर दाहाल र नेपालले देउवा भेटेका थिए । संयुक्त आन्दोलन गर्ने र संसद पुनःस्थापना भए देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव दुवै नेताको थियो । प्रचण्डले सार्वजनिकरुपमा समेत देउवालाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्न तयार रहेको बताएका छन् ।
प्रचण्ड–माधवसँगको भेटलगत्तै अनुपम फुडल्याण्डमा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममा सभापति देउवाले कांग्रेस ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेको संकेत गरे । सोही कार्यक्रममा कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले जनताले सरकार चलाउने म्याण्डेट नदिए पनि संसदका अन्य दलहरुले आग्रह गरेमा कांग्रेसले विचार गर्नुपर्ने बताएका थिए । निधिपछि बोलेका देउवाले भने सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरेनन् । “नेकपाको विवादबारे छिनोफानो हुनुपर्‍यो । अविश्वास प्रस्ताव कसरी आउँछ हेर्नुपर्‍यो । त्यसपछि कांग्रेसले निर्णय लिन्छ”, देउवाले भने ।
संसद विघटनयता राजनीतिक कार्यदिशाको विषयमा कांग्रेसमा तीव्र मतान्तर रह्यो । संसद पुनःस्थापनाको एजेण्डा बोक्नुपर्ने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षको प्रस्ताव देउवाले स्वीकार गरेनन् । अदालतको आदेश कुर्नुपर्ने देउवाको अभिव्यक्तिलाई पौडेल पक्षले ‘ओलीसँगको मिलेमतो’ को रुपमा अर्थ्याइरह्यो । संसद पुनःस्थापनापछि पनि यो विवाद रोकिने छाँटकाँट छैन ।
वरिष्ठ नेता पौडेल प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिए अविश्वास प्रस्तावबाट हटाउनुपर्ने पक्षमा छन् । पौडेल पक्षकै महामन्त्री डा।शशांक कोइराला र पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह ओलीको विकल्प देउवा हुन नसक्ने बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड–माधव पक्ष वा ओली पक्ष जसले अफर गरे पनि सत्तारोहण सम्भव बनाउन देउवाले कांग्रेसकै आन्तरिक अवरोध पन्छाउनुपर्ने हुन्छ ।
“अहिले सबै कुरा भन्ने बेला भइसकेको छैन । संसदको बैठक बोलाइएपछि, नेकपाको स्टाटस कस्तो हुन्छ त्यही अनुसार सभापतिजीले निर्णय गर्नुहुन्छ”, देउवा निकट एक नेताले भने । कांग्रेस वृत्तमा सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने चर्चा चुलिंदो छ तर चित्र प्रष्ट भइसकेको छैन । (नेपालप्रेसबाट साभार)